Global Voices teny Malagasy » Lahatsary 3 Mampiseho Ny Sotasota An-dalambe Mahazo Ireo Vehivavy Ao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy » Print
Lahatsary 3 Mampiseho Ny Sotasota An-dalambe Mahazo Ireo Vehivavy Ao Amerika Latina
Voadika ny 15 Desambra 2014 19:00 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela García Calderón Orbe Nandika (en) i Gabriela García Calderón, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Però, Shily, Venezoela, Fanatanjahantena, Hevitra, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Pikantsarin'ny lahatsary tao amin'ny YouTube.
“Dika avy amin'ny lahatsoratra orizinaly navoaka tao amin'ny Global Voices amin'ny teny Espaniola“
Nanamarika ny Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana Ny Herisetra Mihatra Amin'ny Vehivavy ny 25 Novambra, izay olana goavana any amin'ny firenena maro manerantany. Iray amin'ireo karazana herisetra ny fanorisorenana eny an-dalana, iainan'ireo vehivavy tsy tambo isaina rehefa mandeha eny an-tanàna izy ireo.
Ao Amerika Latina, maromaro ireo lahatsary niresaka ity olana ity. Ao Però, zavamisy ny sotasota eny an-dalana izay vehivavy maro no tsy maintsy miatrika izany , eny fa na dia any anaty fitateram-bahoaka aza. Natalia Málaga , mpilalao voley-ball teo aloha izay mpanazatra ankehitriny ny ekipam-pirenena vehivavy Peroviana no endrika fantatra amin'ny fanentanana  fanoherana ny herisetra an-dalambe “Sílbale un madre tu” (Antsoy hokaotikaotiana ny reninao), izay tohanan'ny fikambanana Paremos el acoso callejero (Atsaharo ny sotasota an-dalambe ) sy ny orinasa fanabeazam-batana sy kojakoja entina amin'ny fanatanjahantena Everlast.
Ao amin'ny lahatsary namboarina, miresaka vetaveta amin'ireo vehivavy mandalo eo akaikin'izy ireo eny an-dalana ireo lehilahy (fantatra ho ireo “faltosos” amin'ny teny Espaniola ireo lehilahy ireo, izay midika hoe tsy misy fanajana). Saingy tsy mahaloa-peo ireo lehilahy rehefa nahita fa ireo vehivavy ireo dia ny renin'izy ireo ihany fa nanova endrika, izay manome felaka am-bava hoan'ny zanaka lahin'izy ireo noho ny fitondratenan'izy ireo.
Nalaza tao amin'ny aterineto ilay lahatsary, maherin'ny 3,4 tapitrisa hatramin'izao no nijery izany tao amin'ny YouTube :
Tamin'ny taon-dasa, nandray anjara tamina fanentanana hafa  avy amin'ny Everlast antsoina hoe “El guantazo de Natalia” (Tehamainan'i Natalia) i Málaga.
Ao Shili, namoaka “zava-iainana ara-tsosialy”  mitondra ny lohateny hoe “La revancha de los agarrones” (Valifatin'ireo mpikitika) ny fantsona YouTube fialana volyWoki Toki volana maro lasa izay, ka olona maherin'ny 4,2 tapitrisa no efa nijery izany. Ao amin'ny lahatsary, manome agarroncito (kitikitika) amin'ny tanana na fe amin'ireo lehilahy ireo vehivavy, fihetsika tsy ankasitrahana izay fanaon'ny lehilahy sasany ao amin'ny firenena amin'ireo vehivavy eny an-dalana.
Amin'ny farany, nilaza ny mpanatontosa ny lahatsary fa gaga izy satria tsy nisy tamin'ireo lehilahy tratran'ny “kitikitika” no nahatsiaro kiriko (misy mihitsy aza ireo sasany nangataka hifanao fotoana taminy). Nilaza tamin'ireo lehilahy mpijery izy mba tsy hi-agarroncitos (hikitikitika) amin'ireo vehivavy satria sady tsy mampahazo aina izany no tsy mampihomehy.
Tamina lahatsary  hafa notontosain'ny fantsona Youtube mpampiala-voly Canilla  tao Venezoela izay mitondra ny lohateny hoe “La venganza de la obrera” (Ny valifatin'ireo vehivavy mpiasa) tamin'ny taon-dasa, nisy vehivavy iray nanome ireo karazan'antso fikaotikaotiana fanaon'ireo lehilahy mpiasan'ny fanorenana tamin'ny fisatrohana aro loha mavo sy fanononana teny fikaotiana tamin'ireo lehilahy mifanindran-dalana aminy, tahaka ny hoe “mandratra anao ve raha mianjera avy an-danitra ianao, ry anjeliko?” Niteraka topi-maso mahasadaikatra maro sy tsiky sanganehana izany fihetsiny izany.
Nahazo mpihery mihoatra ny 1,1. tapitrisa tao amin'ny Youtube ilay lahatsary :
Vakio ny fitantarana manokana ao amin'ny Global Voices: 16 Andro Hanafoanana Ny Herisetra Any An-tokantrano sy Manerantany 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/12/15/66366/
 lahatsary : https://www.youtube.com/watch?v=B3X7xkXaaRQ
 lahatsoratra : https://es.globalvoicesonline.org/2014/12/05/paises-latinoamericanos-en-campana-contra-el-acoso-callejero-de-mujeres/
 tsy maintsy miatrika izany: https://globalvoicesonline.org/2014/06/07/actress-molested-on-a-bus-in-peru-harassment-of-women-in-public-spaces-under-the-scanner/
 Natalia Málaga: http://en.wikipedia.org/wiki/Natalia_M%C3%A1laga
 fanentanana hafa: https://www.youtube.com/watch?v=iqGesBhrbB0
 “zava-iainana ara-tsosialy”: https://www.youtube.com/watch?v=4RkBlUpRQhY
 16 Andro Hanafoanana Ny Herisetra Any An-tokantrano sy Manerantany: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/16-days-to-end-violence-at-home-and-around-the-world/